Useshoda "ngobudlova" emdlalweni wakhe uDlamini wePirates, kusho umqeqeshi - Impempe
Useshoda “ngobudlova” emdlalweni wakhe uDlamini wePirates, kusho umqeqeshi
March 5, 2021 Impempe.com
UKabelo Dlamini we-Orlando Pirates
UKabelo “Shuffle” Dlamini useqalile ukuvela kancane emidlalweni ye-Orlando Pirates njengoba esengena ngesiwombe sesibili ajike izinto futhi uthi sekuseduze abe ngomunye wabaqala imidlalo eqenjini likaJosef Zinnbauer.
UDlamini, oneminyaka engu-24, ungomunye wabadlali abasebencane okubhekwe lukhulu kubo kwiBucs kodwa uke waxakeka esanda kufika njengoba ijezi ubelizwa ngendaba.
Kodwa manje sekuqala ukuntwela ezansi kuye njengoba eselunguza emdlalweni imizuzwana embalwa ngasekupheleni kwayo okuyinto ayibuka njengesiqalo sezinto ezinhle.
“Kade ngisebenza kanzima, futhi ngiyajabula ukuthi sengike ngilithole ijezi manje,” usho kanje uDlamini kwi-website yaleli qembu laseSoweto.
“Esengikufuna manje wukubambisisa leli thuba kuze kuphele isizini nami ngiseqenjini elidlalayo,” kuqhuba le nsizwa ebisemabhukwini eBloemfontein Celtic ngaphambi kokujoyina iPirates.
Uveze nemfihlo esimenze wabuyela eqenjini kanti usazoqhubeka nokuzikhandla ukuze angene ngokugcwele angagcini ngokufika esezochibiyela ngasekugcineni.
Nokho usanda kugila izimanga ebuyisa iBucs seyibheke eweni kwiNedbank Cup, wangena ilandela ngemuva ngo 1-0 kwaphela imizuzu eyishumi yabe seyihamba phambili ngo 2-1.
“(Ithimba labaqeqeshi) Bebengigqugquzela ejimini. Umqeqeshi uhlezi engitshela ukuthi nginekhono elihle lokwakha amathuba okushaya amagoli.
“Into angigqigquzele ukuthi ngiphucule kuyo ukuthi ngibe nobudlova uma ngihlasela. Bengilokhu ngizilolonga kulokho futhi ngibona sengathi sekungcono kakhulu,” kuchaza le nsizwa eyisihlobo sikaJabu “Pule” Mahlangu.
UDlamini uzophinde adingeke uma iBucs seyikhiphana inkani neChippa United emdlalweni weDStv Premiership eNelson Mandela Bay Stadium ngoMgqibelo ntambama. Umdlalo uzoqala ngo 5 ntambama.
“IChippa yiqembu elithanda ukuligingqa phansi ibhola. Bayingozi, futhi bebedlala kahle emidlalweni yabo embalwa edlule. Siyazi ngeke kube lula kodwa kumele siqhubeke nokuzikhandla, sizame ukunqoba kulo mdlalo,” kusho yena.
Previous Previous post: IGalaxy iqhubekile nokuqoqa amaphuzu ibambela iSuperSport ekhaya
Next Next post: Bashaqekile uNgcobo weSwallows esala ngaphandle kwiBafana